Iskuday cherry | December 2019
Ugu Weyn Ee Iskuday cherry
Iskuday cherry. Qaababka beeraha iyo daryeelka
Magaca "cherry qallafsan" wuxuu maqlaa wax yar oo aan caadi ahayn. Waxay u egtahay sida cherry, laakiin nooc ka mid ah ma aha midka aan caadi ahaan u malaynayno oo qiyaasno marka aynu maqalno ereygan. Waa maxay farqiga u dhexeeya caadada, iyo sidee ayay u fiicantahay? Waa maxay sababta ay iyadu, bannaanka u badan - jecel yihiin door bidaan? Tani waa waxa aan isku dayi doono inaan ogaano maqaalkani.
Beelaha ugu qurxan ee qurxinta ee beerta leh sharaxaad iyo sawir
Maanta, bannaanka u koraan on ay sirqo aan khudaarta iyo miraha kaliya, laakiin sidoo kale dhirta in ay awoodaan inay qurxiyaan aagga. Kuwaas oo aan shaki lahayn, waxaa ku jira xayawaanno qurxoon, iyo badi noocyada iyo foomamkooda waxay u oggolaanayaan inay buuxiyaan wixii shuruud ah. Maqaalkani waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan noocyada ugu caansan ee dhirta noocan oo kale ah, kuwaas oo kaa caawin doona inaad go'aamiso xaalada doorashada iyo xulashada muraayadda ugu haboon ee boggaaga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Iskuday cherry 2019